I-QOMO ingumkhiqizo ohamba phambili wase-US nomkhiqizi womhlaba wonke wobuchwepheshe bokwethulwa kwezemfundo nebhizinisi. Kusukela kuma-doc cam kuya kuzikrini zokuthintana ezisebenzisanayo, yithi kuphela uzakwethu oza nolayini womkhiqizo ohlanganiswe ngokugcwele (noguquguqukayo) okulula ukuwusebenzisa futhi okulula kubhajethi. Ngemva kokwenza lokhu cishe iminyaka engu-20, siyaqonda ukuthi kusetshenzwa kanjani. nawo wonke umuntu kusukela kuma-CEO nama-CTO kuya kubaphathi bezifunda nothisha bamagumbi okufundela. I-QOMO iletha izixazululo ezilula, eziqondakalayo ezisiza wonke umuntu ukuthi ajabulele lokho akwenza kangcono kakhulu.
UQomo uzibophezele ekuthuthukiseni ikhwalithi yokufundisa nokusebenza kahle emhlabeni wonke. Sizokunikeza isixazululo esilula, esiqondakalayo esikusiza ukuthi ujabulele okwenzayo.
Futhi xhuma zonke izinsiza zemfundo ezimnandi nge-Qomo smart electronic equipment.
Kungani Khetha Qomo?
Ithimba lethu le-R&D lakhiwe ngochwepheshe abanolwazi olungaphezu kwamashumi eminyaka ku-hardware ne-software. Isizini ngayinye sizoqoqa impendulo yekhasimende kanye nemfuneko yemakethe ukuze sithuthukise imikhiqizo yethu ukuze ihlangabezane nezidingo zemakethe. Sihlose ukuthuthukisa imikhiqizo ehlakaniphe kakhulu enezindleko zomnotho kakhulu kanye nekhwalithi engcono kakhulu!
Yamukela i-OEM/ODM Ngesabelomali Sakho
Njengomkhiqizi, samukela i-OEM ne-ODM ezohlangabezana nemigomo nemakethe yakho. Nakanjani ungasebenzisa ihadiwe yethu yemishini kagesi ehlakaniphile ukuze uhlanganise nesofthiwe yakho. Futhi uQomo uzohlinzeka ngesixazululo esingcono kakhulu sekilasi elihlakaniphile. Kwenze kube lula kubafundi ukuthi babambe iqhaza ekilasini ngaphandle kwamahloni.
Imikhiqizo ehlakaniphile ye-Qomo ikusiza ukuba ufundise, uxhumane futhi usebenzisane kalula nangempumelelo kunangaphambili. Uma unquma ukukhetha i-Qomo njengomphakeli wakho, sizokunikeza insizakalo ephelele yokusebenzisa umhlahlandlela nokusekela.
Futhi unyaka ngamunye, sizohambela i-ISE/Infocomn. Uyakwazi ukuhlola imikhiqizo yethu kalula ngisho nalapho ungazange uvakashele ifekthri yethu.